Fanontaniana | mTomady.mg
1.	Inona ny mTOMADY?
2.	Iza no namolavola ny mTOMADY?
3.	Iza ny “Doctors for Madagascar”?
4.	Iza no sokajin’olona kendren’ny mTOMADY?
5.	Inona ny tanjon’ny “Doctors for Madagascar” amin’ny mTOMADY?
6.	Inona avy ireo tolotra amin’ny mTOMADY ?
7.	Inona avy ny tombotsoa amin’ny fampiasana ny mTOMADY ?
1.	Ahoana no ahafahako manokatra kaonty mTOMADY ?
2.	Inona avy ny antotan-taratasy ilaiko raha hanokatra kaonty na tahiry mTOMADY aho?
3.	Afaka manana kaonty mTOMADY mihoatra ny iray misoratra amin’ny anarako ve aho ?
4.	Inona no atao raha very ny telefaonina na ny karatra fiantso ?
5.	Ohatrinona ny petra-bola kely indrindra ahafahana manokatra kaonty mTOMADY ?
6.	Raha misy diso ny mombamomba ahy amin’ny kaonty mTOMADY, ahoana no ahafahana manitsy izany ?
Ahafahanao manitsy ny mombamomba anao amin’ny mTOMADY dia manatona ny solotenan’ny mTOMADY na antsoy maimaimpoana ny laharana 556
7.	Ahoana no ataoko raha mbola tsy manana Airtel Money, Orange Money na MVola aho ?
1.	Misy safidy iray manokana amin’ireo tambazotram-pifandraisana (Airtel, Orange, Telma) ampiasaina ve raha hampiasa mTOMADY ?
2.	Azo antoka ve ny tahiry amin’ny mTOMADY ?
3.	Mora amiko ve ny hikirakira ny kaontiko na aiza na aiza misy ahy?
4.	Tsy maintsy mandrotsaka vola tsy tapaka ve raha mampiasa mTOMADY (isan-kerinandro, isam-bolana) ?
5.	Azoko atao ve ny mandefa vola avy amin’ny kaontiko Airtel Money/ Orange Money/ MVola mankany amin’ny tahiriko mTOMADY?
6.	Ahoana no ahafahako mandefa vola avy amin’ny kaontiko Airtel Money/ Orange Money/ MVola mankany amin’ny tahiriko mTOMADY?
Mba ahafahanao mandefa vola amin’ny tahiry mTOMADY avy amin’ny kaontinao Airtel Money/ Orange Money/ Mvola, safidio ny tambazotram-pifandraisana ampiasainao ary araho ny toromarika voalaza
7.	Ahoana no ahafantarako fa nirotsaka tao amin’ny kaontiko mTOMADY ilay vola nalefa?
8.	Ahoana no ahafantarako fa tsy mihoatra ny tokony ho izy ny vola asaina alohako ?
9.	Azo foanana ve ny fandefasana vola raha eo am-panatanterahina izany?
10.	Afaka mamindra vola avy ao amin’ny mTOMADY makao amin’ny kaonty Airtel Money, Orange Money na Mvola ve aho ?
11.	Azoko ampiasaina amin’izay mety ilako vola ve ny tahiry mTOMADY ?
11. Afaka maka lelavola amin’ny mTOMADY ve ?
13.	Ohatrinona ny vola betsaka indrindra azo tehirizina amin’ny mTOMADY ?
1.	Misy sarany ve ny fandefasana vola avy ao amin’ny kaonty mTOMADY mankany amin’ny CSB II rehefa handoa ny vidim-panafody ? Tokony efa eritreretina sahady ve izany sarany izany rehefa mikajy ny tahiry ?
2.	Iza avy ireo CSB II/Hopitaly/farmasia ahafahako misitraka ny tolotra rehefa manana kaonty mTOMADY aho ?
3.	Ao amin’ny CSB II/Hopitaly/farmasia miara-miasa amin’ny mTOMADY, iza no atoniko ahafahako mampiasa ny mTOMADY ?
Afaka manatona ny solotenan’ny mTOMADY na ireo mpiasan’ny fahasalamana ianao. Efa voahofana amin’ny fampiasnaa mTOMADY izy ireo
4.	Ahoana no ahafantarako ireo CSB II/Hopitaly/farmasia mpiara-miasa amin’ny mTOMADY?
5.	Ahoana no hanomezana alàlana ny fandoavana ny fanafody/tolotra amin’ny alalan’ny mTOMADY ?
6.	Inona ny mitranga raha tsy ampy handoavana ny fitsaboana ilaiko ny tahiriko mTOMADY ?
Inona avy ny fitsaboana sy tolotra azoko efaina amin’ny mTOMADY ?
1.	Inona ny hoe tombony na bonus mTOMADY ?
2.	Ahoana no ahazoako ny tombony na bonus mTOMADY ?
3.	Ahoana no hikajiana ny tombony na bonus mTOMADY ?
4.	Ao anaty kaonty mTOMADY iray ihany ve no misy ilay tombony na bonus mTOMADY sy ny tahiriko ?
5.	Azoko alaina ve ny tombony na bonus mTOMADY rehefa teraka na raha miala amin’ny mTOMADY aho ?
1.	Inona no atao raha very ny telefaonina na ny karatra fiantso ?
3.	Afaka mandefa vola amin’ny olona mampiasa mTOMADY sahala amiko ve aho, avy ao amin’ny tahiriko mTOMADY ?
1.	Afaka miala amin’ny mTOMADY ve aho?
2.	Inona avy ny antontan-taratasy ilaiko raha miala amin’ny mTOMADY aho ?
3.	Azoko alaina avokoa ve ny vola notehiriziko tamin’ny mTOMADY ?
5.	Lasa aiza ny tahiry mTOMADY raha sanatria ka maty?
Antsoy maimaimpoana ihany koa ny laharana 556
Près-Lot II Y 53bis, Rue Dr Rabenoro